Dolores Redondo ›Bloogga Juan Herranz
Sheekada Dolores Redondo
3-da buug ee ugu fiican Dolores Redondo
Tusaalaha qoraaga Dolores Redondo Waxay ku dhammaataa inay noqoto riyada qoraa kasta oo soo baxaya. Waxay u heellan tahay hawlo kale oo xirfadeed, Dolores waxay had iyo jeer ogaatay in meel bannaan oo loogu talagalay sheekooyinkeeda yar yar ee u horseedi doona shaqooyin waaweyn sida Baztán trilogy ... Asalka sida kuwa badan iyo kuwa badan ...
Wajiga woqooyi ee wadnaha, ee Dolores Redondo
Aynu ka bilowno gundhigga buuggan. Xaqiiqaduna waxay tahay in jilayaasha la silciyay ay had iyo jeer la jaanqaadaan qeybta akhristaha ee xiriirisa taariikhdoodii hore; leh khaladaad ama argagaxyo in ka badan ama ka yar u muuqda inay si xoog leh u calaamadinayaan masiirka jiritaanka. Kor
Waxaas oo dhan waxaan ku siin doonaa, ee Dolores Redondo
Laga soo bilaabo dooxada Baztan ilaa Ribeira Sacra. Tani waa safarka taariikhda daabacaadda Dolores Redondo taas oo u horseedaysa sheeko-yaqaan: "Dhammaan waxa aan ku siin doonaa". Muuqaallada mugdiga ah waxay ku soo beegmayaan, oo leh quruxda awoowayaashood, goobo ku habboon oo lagu soo bandhigo jilayaal aad u kala duwan laakiin leh nuxur isku mid ah. Naftu dhibtay...
Mas'uulka aan la arki karin, ee Dolores Redondo
Amaia Salazar waa kormeere boolis oo ku laabata magaaladeedii Elizondo si ay isugu daydo inay xalliso kiiska dilka ah ee xariifka ah. Gabdhaha qaangaarka ah ee aagga ayaa ah bartilmaameedka ugu weyn ee dilaaga. Markay qorshuhu sii socdo, waxaan ogaanaa Amaia mugdigii hore, oo lamid ah kii ...